गैर प्रोग्रामरहरूको लागि वेब स्क्र्यापिंग: Semalt विशेषज्ञ व्याख्या गर्दछ
यदि तपाईं डाटाको साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ र डाटासेटको प्राथमिक स्रोतको रूपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले वेब स्क्र्यापिंगको बारेमा सुन्नु पर्छ। वेब स्क्र्यापिंग शुरू हुन्छ जब तपाईं इच्छित वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्न असक्षम हुनुहुन्छ। यहाँ हामी तीन उपकरणहरू बारे कुरा गर्नेछौं जुन तपाईले तपाईंको आवश्यकता अनुसार डाटालाई स्क्र्याप गर्न वा निकाल्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
वेब स्क्र्यापिंगले टेक्निक वा विभिन्न साइटहरूबाट उपयोगी जानकारी निकाल्ने विधिलाई बुझाउँछ। यो जानकारी पाठ फाराम र ग्राफिक फारम दुबै निकाल्न सकिन्छ। एकचोटि स collected्कलन गरेपछि, तपाईं जानकारी विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ: शैक्षिक अनुसन्धानबाट इन्टरनेटमा व्यापार वृद्धि। वेब स्क्रोलिंगबाट वेब स्क्र्यापिंगलाई छुट्याउने महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि वेब स्क्र्यापि always जहिले पनि अनस्ट्रक्चर गरिएको जानकारीको ट्रान्सफॉर्मेशनमा केन्द्रित हुन्छ, सामान्यतया HTML को रूपमा। अर्कोतर्फ, वेब क्रलिंग भनेको गुगल, बिंग, र याहू जस्ता खोजी ईन्जिनहरूमा सूचना अनुक्रमणिका गर्ने प्रक्रिया हो।
वेब स्क्र्यापिंगको व्यावहारिक लाभहरू अनन्त छन् किनभने सबै व्यक्तिहरू र व्यवसायहरू यस तरीकाबाट एक तरीकाले वा अन्य तरिकाले लाभान्वित हुन सक्दछन्। उदाहरण को लागी, वेब स्क्र्यापिंगले शैक्षिक र अनुसन्धान उद्देश्यको लागि इन्टरनेटमा सही डाटा फेला पार्न मद्दत गर्दछ। यसले मार्केटर्सलाई अनलाइन अनुसन्धान गर्न र उनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरूले कसरी उनीहरूको व्यवसाय बढाउँदै जान्न मद्दत गर्दछ।
गैर प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरूको लागि तीन वेब स्क्र्यापि software सफ्टवेयर वा उपकरणहरू:
१. तालिका क्याप्चर (क्रोम विस्तार):
यो गुगल क्रोम एक्स्टेन्सन हो जुन तपाईंको वेब ब्राउजरमा थप्न सकिन्छ र तपाईंलाई वेब पृष्ठहरूमा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाइँलाई छिटो पहुँच गर्न र HTML क्लिपबोर्डहरू र स्प्रिडशिटहरू गुगल कागजातहरू, ओपन अफिस, र माइक्रोसफ्ट एक्सेल जस्ता स्प्रेडशीटहरूमा प्रतिलिपि गर्न अनुमति दिन्छ। एकचोटि स्थापना र सक्रिय भएपछि तपाई गुगल क्रोम एक्सटेन्सन पृष्ठमा जानुपर्नेछ र तपाईको वेब ब्राउजरमा यो एक्स्टेन्शन थप्नको लागि "टेबल क्याप्चर" विकल्प खोज्नुपर्नेछ।
२. टेबलमा क्लिपबोर्ड (फायरफक्स विस्तार):
टेबल क्याप्चर जस्तै, टेबल क्लिपबोर्ड एक विस्तृत विस्तार हो जुन फायरफक्स ब्राउजरसँग राम्रोसँग काम गर्दछ। यो यसको सुविधाहरू र गुणहरूमा क्रोम विस्तारसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ, तर केवल भिन्नता यसले तपाईंलाई विशेष तालिका र HTML तालिकाको स्तम्भहरू चयन गर्न अनुमति दिन्छ। यस उपकरणको साथ वेब डाटा स्क्र्याप गर्न एकदम सजिलो छ: तपाईंले केवल टेबलमा माउस कर्सर राख्नुपर्नेछ र टेबुलक्लिपबोर्डको रूपमा शीर्षक विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यहाँबाट, तपाईं प्रतिलिपि गर्न र तपाईंको निर्दिष्ट स्प्रिडशिटमा पूरै टेबल टाँस्न सक्नुहुन्छ।
Google. गुगल कागजात स्प्रेडशिट:
केवल वेबमास्टरहरू र डिजिटल मार्केटरहरू गुगल डक्स स्प्रिडशिटको महत्त्व जान्दछन्। यी समयको साथ बिभिन्न सुधारहरू मार्फत आएका छन्, र बिभिन्न सुविधाहरू मध्येका HTML टेबुलबाट डाटा निकाल्ने र स्प्रेडशिटमा आयात गर्ने सम्भाव्यताहरू छन्। तपाईको जीमेल खातामा तपाई सजीलै गुगल डक्स पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईको खातामा लगईन गर्नु भएपछि तपाई गुगल ड्राईव पृष्ठमा जानुपर्नेछ र सिर्जना गर्नुहोस् -> स्प्रेडशिट बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यस डाटा स्क्र्याप गर्ने उपकरणको उत्तम सुविधाहरू यो हो कि तपाईंको एचटीएमएल तालिकाहरू वेबसाइटमा स्वचालित रूपमा अपडेट हुन्छन्।